प्रशंगवस : चारतारे युवा क्लबको २७ औ साधारण सभा, महोत्सव कि विजयोत्सव ? – ebaglung.com
प्रशंगवस : चारतारे युवा क्लबको २७ औ साधारण सभा, महोत्सव कि विजयोत्सव ?
२०७५ मंसिर १४, शुक्रबार ०७:०६	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ मंसिर १४ । सहकारी जगतमा स्थापित चारतारे युवा क्लब सिवाईसी नेपालले २७ औ साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । २६ औँ साधारण सभा नै नगरी सदरमुकाम बाहिर गल्कोट हटियामा मंसिर ८ गते सम्पन्न गरिएको २७ औँ साधारण सभालाई यस्का आयोकहरुले महोत्सवकै सज्ञा दिएका छन् ।
केहि दिन पहिले गल्कोटकै हटियामा सम्पन्न गल्कोट महोत्सव र त्यस्को केहि किलो मिटर पर बडीगाड गाउपालिकामा प्रथम बडीगाड महोत्सव जारी रहेको अवस्थामा गरिएको २७ औँ साधारण सभालाई आयोजकहरुलाई महोत्सवकै झझल्को आउनुलाई अन्यथा लिन हुन्न ।
बास्तवमा २६ औँ साधारण सभा नगरिकनै गुपचुपमा कामकुरो मिलाएर रातारात बागलुङ बजारकको एक (बेनामी) प्रेसमा मुखपत्र छापी यसैलाई झुटको आधार बनाएर २७ औँ साधारण गर्ने क्षमता राख्नु यो त, आयोजकहरुका लागी ठुलो विजयोत्सवै थियो, महोत्सव मात्र किन ?
असत्यलाई जति लिपपोत गरेपनि त्यो असत्यै नै रहन्छ । त्यसलाई कालीगण्डकीको पवित्र जलमा चोबले पनि त्यो सत्यमा परिणत हुन सक्तैन, केवल कालीगण्डकीलाई दुषित गराउने कुचाल मात्र हो ।
चारतारे युवा क्लब सिवाईसी नेपाल जस्तो स्थापित संस्थाले २६ औँ साधारण सभा नगर्नु भित्रको रहस्य के थियो ? वा यस अघी पनि साधारण सभा नगरी कनै कागजीरुपमा मिलाउने गरेको थियो कि ? आदित्यादि प्रश्नहरु यतिबेला सहकारी जगतमा उम्लिरहेका छन् । चारतारेका ताराहरुले छातीमा हात राखेर भन्न सक्छन, २६ औँ साधारण सभा भएकै हो ? मुख खोल्नुस त, २६ औँ साधारण सभा कुन होटल वा कुन फाँट वा कस्को कुन कोठामा गरिएको हो र कुन प्रमुख अतिथी बनेर उद्घाटन गरेको हो ?
बागलुङका सहकारीकर्मीहरु बीच धेरै गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिएका छन् अर्बौँको कारोबार गर्ने संस्थाको यो कुत्सित चालले सहकारी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव छोड्ला ? यस नाजायज कार्यले चारतारेका ताराहरुलाई कहिल्यै चैनको निद्रा पर्ला ?
बागलुङ बजारको कुन बेनामी प्रेसमा रातारात ग्रामिण कन्दरा मुखपत्र छापिएको हो ? यस पहिलेका मुखपत्रहरु त सयपत्री नामको प्रेसमा छापिने गथ्र्यो, यसमा किन सयपत्री प्रेस (छापाखाना) मा मुद्रित भनेर लेखिएन ? मुद्रकको नाम त लेखिएकै हुनु पर्छ । सयपत्रीलाई बेनामी बनाउनु भित्रको रहस्यले पनि यो २६ औ ग्रामिण कन्दरा पुस्तिका झुटको पुलिन्दा हो भन्ने प्रमाणित गरिरहेको छ ।
बाहिरी आवरण जति सुकै सुकिलो बनाउन खोजेपनि झुट त अन्तत: झुट नै हो । ‘ढाँटेको कुरा काटेनि मिल्दैन’ भन्ने उखान नबिर्सनुस् । छोँटो सोँच राखेर गरिएका यस्ता गलत कार्यहरुले अगाडी बढ्न दिँदैन । कुनियतवस गरेका काम कार्बाहीमा नियतीले पनि साथ दिँदैन । सहकारीको मर्म र धर्म माथी बज्रपहार नगर्न र सबै गाउँठाउँमा फस्टाउदै गएको सहकारीको बदनाम नगर्न सहकारीकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
चारतारे युवा क्लब सिवाईसी नेपालले २६ औँ साधारण सभा नगरिकनै २७ औँ साधारण सभा गर्न लागेको विषय प्रशासनमा नपुगेको होईन, सन्चारमाध्यममा प्रकाशित नभएको होईन, संस्थामा आवद्ध ३ हजार भन्दा बढी शेयर सदस्यहरुलाई जानकारी नभएको होईन, मान्द्रामा सुकाएको बिस्कुन पोखिएर भूँईभरी छताछुल्ल भेैँरहँदा पनि किन चूप ? हिम्मत राख्नु हुन्छ भने २६ औ साधारण सभा सम्पन्न भएको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर सबैको मुखमा बुझो लगाउनु होस । होईन भने, चर्चामा आए जस्तै केहि असन्तुट सदस्यहरुलाई धराशायीअवस्थामा रहेका अन्य सहकारी संस्थाबाट उनिहरुको लाखौँ शेयर रकम फिर्ता गरिदिने, आफ्ना नातागोता हाकिम भएको अफिस बाट कसैलाई पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने शर्तमा तत्काललाई थामथुम पारेर केहि समय असत्यलाई ढापछोप गरिएपनि चारतारे युवाक्लब नेपालको निधारमा लागेको यो धब्बा ब्लेडले खौरिएपनि मेटिन्न भन्ने आमचर्चाको विषय बनेको छ ।
उद्देश्य एउटा काम अर्को
प्रशंग बदलौँ, तीन वर्ष पहिले पर्वत जिल्लाको मोदी खोला स्थित नासा होटेलमा बागलुङका केहि चर्चित सहकारी सन्चालकहरुको बैठकले सन्चार शक्ति भएकोले बागलुङ सदरमुकाममा टेलिभिजन, रेडियो, केबल टीभी, समाचार पत्रिका, ईन्टरनेट सेवा सन्चालन गर्न सहकारी संस्था बनाउने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशमा आयो । त्यस्को लगत्तै बागलुङ सूचना तथा सन्चार सहकारी संस्थालाई नै बिस्तार गरी उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागी गृह कार्य सुरु भयो । घरघर, पसलपसल पुगेर शेयर सदस्य बनाउने अभियान सुरु भयो, लाखौँ रकम संकलन गरियो । शेयर सदस्य बन्नेहरुको रकम अंक र तस्वीर सहित फेसबुकमा छ्याप्छ्याप्ती छापियो । करोडौ रकम संकलन गरी संस्था पुनर्गठन गरियो । बिडम्वना तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उद्देश्य अनुसार सिन्को सम्म प्रगति भएको छैन । शेयरधनीहरुले आफ्नो रकम फिर्ता माग्न संस्थामा धाईरहेका छन् ।
अहिले सुन्नमा आयो, संस्थालाई उद्देश्य अनुरुप सन्चालन गर्न नसकेपछी शेयर सदस्यहरुको व्यापक विरोधका कारण संस्थालई चारतारे युवा क्लब ऋण तथा बचत सहकारी संग एकीकरण (मर्ज) गर्ने असोजमा निर्णय भएको छ । केहि दिन पछी बागलुङ सूचना तथा सन्चार सहकारी र चारतारे युवा क्लब ऋण तथा बचत सहकारी वीच एकीकरण भयो भन्ने समाचार आयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
चर्चित सहकारीहरुका सन्चालकहरुको लहडले गर्ने यस्ता निर्णय र गतिविधीहरुले जिल्ला कै सहकारी अभियानमा ठेस नपुग्ला भन्न सकिन्न । चाहै आफै या कसैसंग मर्ज गरेर भएपनि उद्देश्य अनुरुप सहकारी सन्चालन गरिनु पर्छ नकि दाम उठाउने आफनो अनुकूल काम गर्ने हो भने त यो कसरी सहकारी भयो र ? आफ्नै भकारी भर्ने प्रपन्च भएनर ?
माईक्रोबसमा दिउसै सरर : बुर्तिबाङ-काठमाडौं-बुर्तिबाङ माईक्रोबसको दिवा सेवा सुरु !
आजको तस्वीर : महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा बुर्तिवाङ बजार सरसफाई !